23 OTU IZU IZU FIFA 19: NYOCHAA NA NDEPỤTA NKE NDỊ EGWUREGWU - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Ewebata izu nke XXIII nke izu FIFA 19
Ndị mmepe nke FIFA 19 site na EA studio na-enye ndị egwuregwu nke narị afọ nke iri abụọ na atọ n'izu. Ndị dike nke izu gara aga rutere ya, ha jisiri ike mee ka ha nwee mmeri n'ọgba egwuregwu nke ụlọ.
Egwurugwu nke otu izu nke otu izu FIFA 19
Ndị na-echebe onwe ha
Ọnụ ọnụ ụzọ ámá nke otu izu bụ Jan Oblak. Ezigbo onye nchebe nke Slovenian na onye na-eche nche na Atletico Madrid gbapụtara isii gbaa ọsọ site n'aka ndị agha Rayo Vallecano, ụlọ klọb ya merie 0-1 na egwuregwu kacha sie ike.
Onu ogugu ohuru ohuru bu nani otu ihe wee buru ihe ndi choro nke ndi nzuko Spanish La Liga. Onye na-eche nche ahụ na-arụ ọrụ dị mma ma na rịịbịịtị ahụ na nsị. Ma eleghị anya, Oblak abụọ ma bụrụ otu n'ime onye na-elekọta ya kacha mma.
N'etiti ogige ahụ, ndị dike nke izu gara aga na-esonye na asọmpi Europe. Onye na-echebe PSG Marquinhos nyeere ọgbakọ ya aka ịnagide n'okporo ụzọ na Saint-Etienne na-enweghị nsogbu. Ọ bụ n'ihi nhọrọ ntanetị Brazil 2 na pasent 92 nke ziri ezi. Ọtụtụ mkpọmkpọ ebe na-amalite kpọmkwem na ebe a.
E nyere onye na-agbachitere onye nkwado dị elu 3. Ugbu a, Marquinhos aghọwo ọbụna ngwa ngwa, na nchịkwa data ya dị mma ga-eme ka ọbụna nweekwu obi ike itinye ozu ahụ n'ọgụ maka ọnọdụ ahụ.
Ya na Marquinhos nọ n'etiti ebe a na-agbachitere bụ ebe a tụkwasịrị obi na Villareal Alvaro. Ebe a na-akpọ Spanish bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-anwa ịdọrọ ụgbọ mmiri edo edo site na ala La Liga. Ọ ghọrọ onye kachasị mma n'òtù nchebe nke egwuregwu ya na Seville, na-enweta atụmatụ nke 8.0 site na ya. Alvaro Gonzalez Soberon meriri 4 air duels ma mee nhọrọ 3.
Onyinye onye na-agbachitere kwupụta ọkwa ise dị na ya, egwuregwu ahụ na Alvaro na-aghọkwa nke ka mma. Ezigbo onye na-agbachitere mgbakọ Spanish!
Onye na-agbachitere isi nke atọ n'ime otu izu ahụ bụ n'akụkụ aka ekpe nke Genoa Domenico Criscito, onye meriri ihe mgbaru ọsọ mmeri megide Roman Lazio. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ mbụ nke Domenico mgbe ọ laghachiri Ịtali! Njem njem na St. Petersburg Zenith bara uru maka onye ọkpụkpọ egwuregwu, n'ihi na ọ bịara bụrụ ihe a pụrụ ịdabere na ya n'ịgbachitere ya na iji ihe mgbaru ọsọ na mbuso agha ahụ.
Krishito kwadoro ogo 3. Onye ahụ na-agbachitere ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị njọ, nke a na-agbakwụnye site na isi nkà isii.
N'elu aka ekpe nke agbachitere ahụ bụ Ezeley Coman bụ onye Bavarian. Nke a na-ekpo ọkụ nke Frenchman na-ekpo ọkụ site na kọmpụta nke Europe, ma n'ikpeazụ, mgbe PSG na Juventus gasịrị, Koman chere onwe ya na Bavaria. Onye ọkpụkpọ ahụ abaara ndị otu egwuregwu egwuregwu na Augsburg, na-eme okpukpu abụọ ma na-ahapụ ohere ịnweta aka nri nke ụlọ ahụ.
Ndị mmepe zụlitere ụda nke abụọ site na Koman, na-agbakwụnye ngwa ngwa na nkpa na nkwụsịtụ nke nkedo.
N'elu aka nri bụ Kerem Demirby nke Germany. Hoffenheim midfielder bụ kpọmkwem aka na mmeri nke Hanover. The player gbatara a mgbaru ọsọ na aka na striker Isak Belfodil.
Ihe ngosi nke Demirbai nke ohuru abiala na nchoputa a site na ulo oru ise di iche iche, bu otu n'ime ihe ndi mara amara na nzuko ndi Germany ohuru. Onye ọkpụkpọ ahụ wepụtara nkà nke ọsọ, ịkụ aka na izi ezi nke ugbo.
Na mpaghara etiti nke ndị egwuregwu na-echere Spanish-Belgian duo. Onye agha Midia Girona Porto ghọrọ otu n'ime ndị dike nke nzukọ ahụ megide isi obodo Real Madrid. Ọ meriri ihe mgbaru ọsọ mmeri na minit 75 nke nzukọ ahụ wee ghọọ onye ndú otu, onye kpaliri ndị enyi ya na-agbachitere onwe ha na minit iri gara aga megide ụlọ eze.
Kaadị ọhụrụ nke Christian Portuguesa natara ọkwa nke ihe atọ. Ndị mmepe emeela ka ọkpụkpụ na-agafe, dribbling na ọsọ.
Onye Belgium nwere Raja Naingolan, onye laghachiri n'ụdị kacha mma, guzobere na CPU Spanish. Na egwuregwu megide Sampdorovia, opornik ama akara ya na ihe mgbaru ọsọ dị egwu na minit 78. Raja ji nwayọọ nwayọọ ghọọ onye ndú ọhụrụ nke Inter, na-arịwanye elu na-etiti n'etiti ubi ma malite ịmalite ọgụ.
Ịbawanye ọkwa n'ozuzu site na nkà 1, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ gbanweghị ihe ọkpụkpọ ahụ n'ụzọ dị ịrịba ama, na-agbakwụnye ndị hụrụ Italian Series-A mgbakọ ọrụ ahụ: iji jide otu ọhụụ ọhụrụ nke etiti midfielder nke na-ebuso ya agha na-eme ka ọganihu na ọganihu dị elu.
N'akụkụ aka ekpe nke ọgụ ndị agha ahụ, dike nke egwuregwu n'etiti Sporting na Braga Bruno Fernandes dị. Onye na-eme ihe nkiri ahụ na-ama aka akara mmalite nke ndị ọbịa na Lisbon. Onye ọkpụkpọ ahụ meriri ihe mgbaru ọsọ na ọkara mbụ, na nke abụọ nyere onye enyemaka Basa Dost aka.
Kaadị ọhụrụ Fernandez bilitere n'ọkwá site na isi atọ. Ihe ọkpụkpọ ahụ aghọọla ngwa ngwa, ya gaferekwa ogo redio. N'eziokwu, o siri ike iche n'echiche ndị otu egwuregwu nwere ike ịnweta ọkpụkpọ a. Enweghi otutu ndi mmadu iji kpokota otu ndi otu mba Portugal ma obu ndi kacha mma n'egwuregwu a.
N'elu aka nri nke agha ahụ, onye agha Poland bụ Krzysztof Pentek, bụ onye ndị nnọchianya EA kwadebere maka ogologo oge iji nweta ndepụta n'elu izu ahụ. Onye ọkpụkpọ ahụ nyere Milan aka imeri Atalanta. Ogige ahụ nwetara ihe mgbaru ọsọ abụọ, mgbe ọ bịarutere Cristiano Ronaldo na mwakpo bọmbụ ahụ.
Map nke Pentecoca enwetawo nlele isii. Ihe ọkpụkpọ ahụ na-egosi nsonaazụ dị egwu na football, n'ihi ya, o kwesịrị inwe mmelite na klas na n'elu ụlọ ọrụ FIFA 19. Oge a ka onye ọkpụkpọ ahụ nwere ọganihu n'ịgba, dribbling na ọsọ ọsọ.
Na njedebe nke ọgụ ndị agha nke izu bụ nwa ebighi ebi bụ onye, ​​ka o yikarịrị ka o mechara too. Mario Balotelli, onye si na Nice gaa Marseille, gbanye mgbọrọgwụ n'ime ụlọ ọhụrụ. N'ụlọ egwuregwu ahụ megide Amiens, onye ahụ gburu ihe mgbaru ọsọ ya na bọl ahụ, ya na ndị otu, na-egwu ndị iro ahụ ugboro iri na ise.
Rookie Olympica wetara ọkwa ya site na 2 nkeji. Balotelli mụbara nkà na isi ya.
Na bench wee bụrụ ụfọdụ ndị na-akpali mmasị na football egwuregwu ndị dị oké ọnụ ahịa na-aṅa ntị na fan nke egwu ọgụ ọgụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye nlekọta kachasị mma na ụlọ ọgbakọ gị, wee lebakwuo anya na ọdụ ụgbọ mmiri Fiorentina Jordan Veret. Kaadị ọhụrụ na ọkwa nke 82 bilitere n'eziokwu nke ugbo na dribble.
Winger Galatasaray Algerian Sofyan Na-atụ egwu na ọnụ ọgụgụ nke 82 nkeji ga-abụ ezigbo rocket na nri flank, na mgbe a dribbling pụtara ga-eme ka a na-elu nnyefe n'etiti etiti.
Onye nabatara ihe dị otú ahụ nwere ike ịbụ Cagliari Leonardo Pawletti. Otu Ịtali dị ogologo na-arụ ọrụ nke ọma, ya na kaadị ya nke 82 ga-eme ka ọ bụghị naanị ịkwanye elu elu ahụ, ma ịkwanye ndị iro gị n'ime ahụ.
Otu izu nke iri abụọ na atọ n'izu ahụ bụ ihe na-akpali akpali ma na-adọrọ mmasị. Ụfọdụ egwuregwu ga-ada maka mgbakọ abụọ na mmefu ego.